ပိုဆိုက်ဒန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပိုဆိုက်ဒန် (ဂရိ: Ποσειδῶν; အင်္ဂလိပ်: Poseidon) သည် ဂရိဒဏ္ဍာရီ နှင့် ရှေးခေတ်ဂရိဘာသာရေးမှ အိုလံပတ်တောင်၏ နတ်ဘုရား (၁၂) ပါးတွင်ပါဝင်၍ ပင်လယ်ပြင်၊ မုန်တိုင်း၊ ငလျင် နှင့် မြင်း စသည်တို့ကို ကိုယ်စားပြုသော နတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ကိန်းဘရစ်ချ် အသံထွက်အဘိဓာန်တစ်ခုအရ 'ပိုဆိုက်ဒန်'၊ 'ပဆိုက်ဒန်'၊ 'ပေါ်ဆိုက်ဒန်' ဟူ၍ ထွက်ရှိသည်။ ဂရိဘာသာဖြင့် 'ပိုဆေးဒေါန်' ဟု အနီးစပ်ဆုံး အသံထွက်နိုင်သည်။ ဂရိကြေးခေတ် (အိုလံပတ်တောင်နတ်ကိုးကွယ်မှု မတိုင်ခင်) ပိုဆိုက်ဒန်ကို ပိုင်းလော့စ်မြို့နှင့် သီးဗာမြို့ တို့တွင် အဓိကနတ်ဘုရားအဖြစ် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် 'မြေငလျင်လှုပ်ခတ်သူ' ဟူ၍ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုရှိသည်။ တသီးတခြားရှိသော အာကေးဒီးယားဒေသ၏ ဒဏ္ဍာရီများတွင် ဒစ်မီးတာ နှင့် ပါဆက်ဖန်နီတို့နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကာ မြင်းတစ်ကောင်အဖြစ်လည်း ကိုးကွယ်ကြ၏။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် မူလအစက ရေပြင် နတ်ဘုရား ဖြစ်ဟန်တူခဲ့၏။ များသောအားဖြင့် မြင်းများကို ယဉ်ပါးစေသူ၊ မြင်းတို့၏ ဖခင်အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ယူဆကြသည်။ ၎င်း၏ သုံးခွခက်ရင်း ထိုးစိုက်ခြင်းနှင့်အတူ ရေစမ်းများ ပေါ်လာစေခဲ့ရာ ထိုရေစမ်းသည် မြင်းဆိုသည့် စကားလုံးနှင့် (ဘာသာဗေဒအရ) ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ပိုဆိုက်ဒန်၏ ရောမအမည်မှာ နက်ပကျွန်း (/နပ်တျူးန်/) ဖြစ်၏။ ဟဲလန်နစ်ခေတ် (Hellenic - ဟဲလင်နစ်စတစ်ခေတ် နှစ် ဟဲလားဒစ်ခေတ်ကြား) ရှိ မြို့တော်များ၊ ကိုလိုနီနယ်မြေများနှင့် သက်ဆိုင်သောသူဖြစ်၍ ပင်လယ်ပြင်ခရီးသွားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူဖြစ်သည်။ ဟိုးမား နှင့် ဟီးဆီးယဒ် တို့က ပိုဆိုက်ဒန်သည် ဖခင် ခရိုးနပ်စ် ရှုံးနိမ့်သွားသောအခါ ညီအကိုသုံးယောက်ကြား နယ်မြေခွဲဝေချထားမှုအရ ဇုစ်က ကောင်းကင်ပြင်၊ ဟေးဒီးစ်က မြေအောက်ကမ္ဘာနှင့် ပိုဆိုက်ဒန်က ပင်လယ်ပြင်ကို ရရှိ၍ ထိုသုံးဦးစလုံးမှာ မြေကမ္ဘာ၊ အိုလံပတ်တောင်တို့နှင့်လည်း သက်ဆိုင်ကြ၏။ ဟိုးမား၏ အိလိယဒ်ကဗျာတွင် ထရိုဂျန်စစ်ပွဲ၌ ပိုဆိုက်ဒန်က ထရိုဂျန်သားများကို တိုက်ခိုက်သော ဂရိများဘက်က ထောက်ပံ့သည်။ ဩဒဆီကဗျာ၌ ထရွိုင်မြို့မှ အစ်သကာမြို့သို့အပြန်ခရီးစဉ်တွင် ဂရိသူရဲကောင်း အိုဒစ်ဆီးယပ်စ်သည် ပိုဆိုက်ဒန်၏ သားတစ်ဦးဖြစ်သော ဆိုက်ကလော့အနွယ်ဝင် ပေါ်လီးဖီးမက်စ်၏ မျက်လုံးဖောက်ထုတ်ခဲ့၍ ပိုဆိုက်ဒန်ကို အမျက်ထွက်စေခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ပိုဆိုက်ဒန်က မုန်တိုင်းခတ်၍ အပြစ်ပေးရာ သင်္ဘောနှင့် အပေါင်းအသင်းများ သေဆုံး၍ ခရီးစဉ်လည်း ဆယ်ရက်နောက်ကျခဲ့သည်။ ပိုဆိုက်ဒန်သည် ဟိုးမားဓမ္မတေးများ၏ ဖွဲ့နွဲ့ခံ အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပေသည်။ ပလေးတိုး၏ Timaeus နှင့် Critias တို့တွင် ဒဏ္ဍာရီလာကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အတ္တလန်းတစ်ကျွန်းသည် ပိုဆိုက်ဒန်၏ နယ်မြေဟု ဆိုထားသည်။
နတ်ဘုရား (ပင်လယ်၊ မုန်တိုင်း၊ ငလျင်၊ မြင်း)
ဘီစီ ၂၀၀ခန့်က မိလော့စ်ကျွန်းမှ ပိုဆိုက်ဒန် (အေသင်မြို့ ရှေးဟောင်းသုတေသနအမျိုးသားပြတိုက်
အိုလံပတ်တောင် (သို့) ပင်လယ်
အသွားသုံးချောင်းရှိ ခက်ရင်းခွ၊ ငါး၊ လင်းပိုင်၊ မြင်း၊ နွားသိုး
ခရိုးနပ်စ် နှင့် ရီးယာ
ဟေးဒီးစ်၊ ဒစ်မီးတာ၊ ဟက်စ်တီးယာ၊ ဟဲရာ၊ ဇုစ်၊ ခိုင်ရန်
အမ်ဖစ်ထရိုက်တီ၊ အဲဖရာဒိုက်တီး၊ ဒစ်မီးတာနှင့် အခြားများစွာ
အသီးနာသည် ပိုဆိုက်ဒန်နှင့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအပြီး အေသင်မြို့၏ ကာကွယ်သူ နတ်ဘုရားမ ဖြစ်လာခဲ့ကာ ပိုဆိုက်ဒန်သည် အခရောပါလစ် (Acropolis) ခေါ် ခံတပ်မြို့တွင် ၎င်း၏ကိုယ်စားပုံစံ 'အစ်ရက်သီးယပ်စ်' (ဘုရင်) အနေဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် ၎င်းက အေသင်မြို့သားများသည် ၎င်းအား မရွေးချယ်ခဲ့သည့်အတွက် အေသင်လွင်ပြင် (Attic Plain) ကို အကြီးအကျယ် ရေလွှမ်းစေခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Burkert 1985, pp. 136–139.
↑ Jones၊ Daniel (2003) ၊ Peter Roach; James Hartmann; Jane Setter (eds.)၊ English Pronouncing Dictionary၊ Cambridge: Cambridge University Press၊ ISBN 978-3-12-539683-8
↑ Plato (1971)။ Timaeus and Critias။ London, England: Penguin Books Ltd.။ pp. 167။ ISBN 9780140442618။
↑ Also it has been interpreted that Plato or someone before him in the chain of the oral or written tradition of the report accidentally changed the very similar Greek words for "bigger than" ("meson") and "between" ("mezon") – Luce၊ J.V. (1969)။ The End of Atlantis – New Light on an Old Legend။ London: Thames and Hudson။ p. 224။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပိုဆိုက်ဒန်&oldid=707130" မှ ရယူရန်
၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။